Biodegradable မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်များ ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး Biodegradable မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်များ မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
SHANG SHIEN CHENG INDUSTRY CO., LTD. တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် Taiwanအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသူကို Biodegradable မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်များကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်မား, စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client များအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့။ သင်၌စိတ်ဝင်စားကြကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - PLA URN01
၁၀၀%biodegradable PLA ထုတ်ကုန်-Biodegradable urn-အဖြူရောင်
သင်လိုအပ်သောအရိုးပြာကိုထိန်းသိမ်းပါ,လူဖြစ်စေ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေဖြစ်စေ,ယခုရွေးချယ်စရာအသစ်တစ်ခုရှိသည်.biodegradable ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော columbarium သည်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်,၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကွဲပြားသောအသွင်အပြင်များနှင့်အရောင်များလည်းရှိနိုင်သည်.ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များ.
အကောင်းဆုံး Biodegradable မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်များ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Biodegradable မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်များ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ